🥇 ▷ Waxaa horay u jiray ciyaaro gacan-qabasho ah oo ka socda Amazfit Sports Watch 3 iyo Amazfit X! ✅
Waxaa horay u jiray ciyaaro gacan-qabasho ah oo ka socda Amazfit Sports Watch 3 iyo Amazfit X!
Amazfit Sports Watch 3 (oo loo siidaynayo aduunka oo dhan sida Amazfit Stratos 3) wuxuu leeyahay magaca saxda ah ee xiiseeya ciyaaraha iyo ciyaartooyda xirfadlayaasha ah. Waa la heli doonaa Isboortiga Isboortiga 3 wuxuu ku yimaadaa labo nooc – Daabacaadda caadiga ah iyo Daabacaadda Elite. Gacan-ku-muujinta waxay muujineysaa inaan wajaheyno qalab xoog leh iyo naqshad aad u xiiso badan! Si kastaba ha noqotee, Amazfit X wali gadaal ugama harin midkoodna!
Qalabka saacadu wuxuu ku egyahay 1.34 inji xoog yar oo iftiiminaysa shaashad midab ah Arrin xiise leh ayaa ah in marka loo eego Huami iftiinka xoogga badan, uu shaashadda ka sii iftiimayo. Daabacaadda caadiga ah waxaa daboolay galaaska Corning Gorilla Glass 3. Daabacaadda ‘Elite Edition’ waxay kuxiranaysaa muraayadda safayr. Waxaa jira afar batoon labada nooc ee saacadda. Sidaas awgeed, hal chip iyo nidaam hawlgal ah oo loogu talagalay nooca isboorti ee xirfadleyda ah (nooca isboortiga) iyo chip kale iyo nidaamkiisa loogu talagalay habka smartwatch joogto ah (mode mode).
Sports Watch 3 waxay leedahay 512 MB oo ah LPDDR3 RAM iyo 4 GB oo kaydinta eMMC ah, in kasta oo kaliya 1.9 GB ay isla markiiba diyaar tahay. Si kastaba ha noqotee, ciyaartoy muusig ayaa sidoo kale jooga. Waad keydin kartaa raadad kala duwan oo waxaad ku dhejin kartaa dhegaha Bluetooth-ka. Saacadu waxay lasocon kartaa wadar ahaan 19 nooc isboorti oo kala duwan.
Amazfit Sports Watch 3 waxay leedahay batari 300mAh ah.
Markaa waxay qaadataa 2 saacadood in lagu dallaco. Si kastaba ha noqotee, hab casri ah, saacaddu waxay socotaa 7 maalmood oo hal kicitaan ah, halka habka aadka u sarreeya uu socon doono 14 maalmood. Habka GPS wuxuu socdaa illaa 35 saacadood oo leh saxsanaan sare, 45 saacadood oo leh saxsanaan dhexdhexaad ah iyo 70 saacadood oo ah habka badbaadinta tamarta ee GPS.
Isticmaalayaashu waxay ka dooran karaan seddex iskudhaf wareejin – GPS + Beidou, GPS + GLONASS ama GPS + Galileo. Sidoo kale xaadirkan waa NFC.
Amazfit X weli waa fikrad laakiin runtii waa mid xiiso leh, sida gacmaha loo muujiyey!
Waxay adeegsaneysaa naqshad bir oo dhan oo isku dhafan oo leh badhamooyin elektiroonig ah oo qarsoon oo beddelaya badhamada dhaqanka. Qalabkan smartwatch wuxuu leeyahay shaashad jilicsan oo 2.07 inch ah oo dabacsan.
Bacdamaa Motherboard-ka uusan laaban karin, Amazfit X wuxuu leeyahay qaanso 3-qaybood ah si ay ula qabato laabta. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale leedahay 220mAh batari lithium batari ah, kaas oo loo maleynayo inuu taageeri doono ilaa 7 maalmood nolosha batteriga. Siideynta ayaa loo qorsheeyay sanadka 2020.